Su'aalo & Jawaabo Diini ah
Shabakada Qorahay Online
Jawaabaha Sheikh Abdirahman Sheikh Hassan Magan ghd straightener cheap
Boggan waxaan ugu tala galay in ay ka faa'iidaystaan dhamaan dadka doonaya in looga soo jawaabo Su'aalaha diiniga ah ee mugdiga kaga jira. Hadii aad doonayso in su'aal diini ah lagaaga soo jawaabo, Waxaad su'aasha ku soo hagaajin kartaa e-mailkan.
Back Home Su'aal: Maliinta jimcaha waxaan ognahey in ay tahay ciida todotaadka, laakiin waxaan rabaa inaan ogaado maxay fadli dheer tahay malmaha kale oo loo bahan yahay in la qabto sida quraan la akhriyo iyo Wixii lamid ah.
JAWAAB: Maalinka jimcadu way ka fadlibadantahay maalmaha kale sababtana waxaa cadeeyay Nabiga SCW xadiis uu soosaaray Tirmidi, waxuuna yiri SWC ��Maalin ay qoraxdu soo baxdo waxaa ugu khayr badan jimcada waana maalinkii la abuuray Aadam, janadana la galiyay lagana soo saaray qiyaamaduna waxay dhici maalin jimca ah Ilaah baana xaqiiqada garan
Su'aal: Waxaan doonaayaa sheekh inaad iga jaahil tirto diintu waxay ka qabto, hadii aan mehersado gabadh aan reerkooodu i siin anagaa isla joogna meel qurbe ah oo aan waalidkeed iyo dadkii waligeeda ahaa joogin??? Kenya
JAWAAB: Gabadhu ma mehersamayso wali la��aan waxaana ku soo arooray Axaadiis kala duwan sidaasaana reerka maslaxa u ah dhismihiisa Qur��aankana markaad u sii fiirsato waxaad ka helaysaa aayado tilmaamaya waliga, Ilaahbaa garan xaqiiqada.
Su'aal: Walaal waxaan rabaa Magaca Maalik wiil ma loo bixin karaa?? Finland
JAWAAB: Wax dhib ah ma laha in loo bixiyo ruux magacyada uu ilaahay leeyahay waxii aan ahayn kuwa uu gaarka u layahay waxaana kamid ah Raxmaan, marka dhib ma laha ruuxa loo bixiyo maalik. Ilaahbaa garan xaqiiqada
Su'aal: Waxaa jirtay inaan niman dhalinyaro ah aan ahayn shirkad xiligii aan Somaaliya joogay waxaa igu dhuntay lacag iyagu aanay ogeyn kadib markaan imid halkan (dibada) imid lacagahoodii ayaan udiray iyagoo aan ogeyn lacagtu waxay tahay arrintaas diintu maxay ka qabtaa dayntaasi ma iga gud matay mise waa inaan u sheego inaan lacagtaas horay uga khiyaamay jawaab ayaan karaba.
JAWAAB: Lacagta aad khayaantay waxaa lagaa rabaa inaad u sheegto cidaad ka khayaantay, si ay kuu cafiyaan ooy u ogaadaan, sidaas baana kuu noqonaysa kafaara gud, maxaa yeelay adiga umbaa ogaa inay khayaano tahay hadiise dhib wayn kaa soo gaarayo sheegideeda wax dhib ah ma laha ee iska bixi uun lacagta. Ilaah baana garan xaqiiqada
Su'aal: Qof haddii uu xaaskiisa gadaalkaga yimaado asagoo og iney xaaraan tahay muxuu yahay xukunkiisa? miyey kafurantahay mise wax kale uu sameynkaro ayaa jira? taasi waamid. Mida kale waa asaga farajkiisa afka magashankartaa? asgana sidoo kale keedii afka mala geli karaa haddii ayada weydiiso? maxay diinta islaamka arimahaas ka qabtaa. Holland
JAWAAB: Ma banana in xaaskaaga aad uga tagto xaga dambe waana xaaran oo waxaa ku soo arooray axaadiis kala duwan hadyse dhacdo kama furmayso. Mida kale ma fiicna in afka ilaahay lagu xusayo la galiyo farjiga, hadey biyuhu ku dhacaan ooy caafimaad daro keenaysana waaba xaaraan. Xaqiiqadana ilaahbaa garan
Su'aal: Raashinka laga cuno MCdonarka in ay xaal tahay in kale iyo kuwa lamid ahba. usa
JAWAAB: Cuntada dadka aan ahayn Muslimiinta waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood, 1 Mid ah cuntooyinka aynu naqaano sida bariiska iyo waxa la mid ka ah wax dhib ah ma laha, hadayna wadanin wax kale sida khamra oo lagu daray markaas xaaraan bay noqon. 2 Cuntada kale waa waxa ku saabsan hilibka way banaantahay hadii la hubo inay yihiin dad diintooda haysta waxaana cadynaya aayada 5 ee suurada Al-Maa��ida.
Xaqiiqadana ilaahbaa garan
Su'aal: Hadii anigoo xanaaqsan xaaskayga aan ku iraahdo waan ku furay, Ma iga furntaa?. Holland
JAWAAB: Waxaa jira xadiis uu soosaaray Axmed, Abuudaa��uud, Ibnumaajah, oo Nabigu SCW yidhi ��Waxba kama furmayaan ruuxa is xidha�� taas oo macnaheedu tahay ruuxa aad u cadhooda ilaa uu gaadho heer uu ka tago caqligu ama wacyigu. Xaqiiqadana ilaahbaa garan
Su'aal: Hadii aad dhahdid waxaas hadaan sameeyo ama aad ku dhaaratid in ay xaskaada kaa furantahay sida ay somalida badana dhahaan, naa waxaas hadii aan sameeyo adigaa iga furan, hadana aad waxa sameesid xaskaada ma kaa furan taa? Somalia
JAWAAB: Dhaartu waxay leedahay diinta islaamka xukun, waxayna tahay hadii aad shay ka dhaarato deedna aad fulin waydo waxaa lagugu leeyahay 10 miskiin inaad wax siiso ama aradbixiso ama adoon xorayso hadaad intaa heli waydo waxaad soomaysaa 3 maalmood arintaana waxaa cadaynaya aayada ku jirta Al-Maa��ida. Mida kale hadaad xaaskaaga ku xirto shay kale furniiyaheeda way furmaysaa hadii la sameeyo waxaa lagu xiray.
Ilaahbaana garan xaqiiqada
Su'aal: Waxaan ahay gabadh ku nool dalka sweden waxaan aad u jeclaysatay in aan barto tafsiirka Qur��aanka kariimkah, gurigana ii ma taalo dhaatadu markaa sideen ubaran karaa? quraanka iyo tafsiirkiisaba? Sweden
JAWAAB: Qur��aanka iyo tafsiirkiisa inaad barato waqtigan way dhib yartahay waxaanad haysataa fursad qaali ah oo laga yaabo inaada helin hada ka dib ruuxuna asagaa wax is bari kara waqtigan lagu jirana ma jiro ruux jahli loogu cudurdaari wax kasta waa banaanka.
Su'aal: Ninku hadii uu furo sedex jeer xaaskiisa maloo hayaa waxjawaaba ah ama qiil ah waayo waxaa jira sheikhyo leh waxaa loo samayn Nikaax cusub oo sidii laba ruux oo cusub oo kale. Norway
jawaab: Ninku hadii uu furo xaaska sadex jeer oo kala duwan ama isku mar ahayn wax qiil ama qawi ah looma hayo, laakiin hadii uu isku mar rido sadexda waa mas��ala ay isku khilaafeen culimadu oo qaarbaa leh hal dalqad umbaa dhici. ilaahbaana garan xaqiiqada
Su��aal: Salaamacaleykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waxaan idin weydiinaya gabar garoob ah maguursan kartaa weli la.aantiis maadaama layiri guur ma jiro weliga gadar ama garoob la,aan dad ayaa isku haya in ey guursan karto iyo inkale uk Jawaab: Walaal culimada islaamku waxay u badanyihiin in haweenku ayna wali la'aan sidoo kale ayna wax guurin karin waxaana sidaa qaba sadexda madhab ee kale Xanafiyada mooyee waxay daliishanayaan culimada badankeedu axaadiis badan ooy soo kala saareen Axmed, asxaabu sunan, Daaruqudni, culimada xanafiyadu waxay leeyihiin gabadhu marhaday qaangaadh tahay ayadaa wilaayadeeda u dhiiban karta laakiin wax daliil ah oo ku cad ma haystaan.Waxaan taas ku jirin gabadha garoobka ah ayadu way ka duwantahay waxaana ku soo arooray axadiis ay soo kala saareen (Ibnumaajah, culimada loo yaqaano al jamaaca Bukhaari mooyee) axaadiistaa waxaa ka mid ah mid uu yidhi Nabigu scw naagta garoobka ahi ayadaa nafteeda ka hadlaysa abuudaawuud waxa uu soo saaray inuu yidhi nabigu scw waligu tala kuma laha gabadha garoobka ah .sidaa darteed waxaa munaasab ah in gabadhu ayna guursanin wali la aan si reeku u hagaago .
Su��aal: Walaalayaal waad salaamantihiin naag uur leh haday ogaata waxa ay caloosha ku sida madanibaa misa ma aha (London) Jawaab: Wax dhib ah kuma jiro gabadha la saaro kumbuyuutar si ay u ogaato waxa ku jira caloosheeda laakiin waxaan haboonayn in aad rumaysato wax kasta oo dhakhtarku kuu sheego.
Su��aal: Asalaamu caleykum waraxmatulaahi walaal hadii ay dad xaas ah islaseexdaan iyaga oon qabeesan ma aadi karaan magaalada maxey kaqabtaa diinta islaamka arintaas? (usa)
Jawaab: :Wax dhib ah ma laha in aad u baxdo banaanka adoo qaba qasli laakiin waa wax laga haboonyahay.
Su��aal: Hadii ay gabdh muslimat ah ay dhasho cunug oo ku dhasho saxiibtinimo laakiin marka hore waxay isku guursaden nikaax dhab ah laakiin uma sheegin wadanka ay ku noolyihiiin dawladeeda sidaasna cunuga ku dhashay ayagoo fiirinaayo dhaqaale soo galaayo owgeed maxay diinta ka tiri arintaas (Denmark) Jawaab: Ma haboona in gaalada loo sheego been adigoo dhaafsanaya aduunyo waxayna arintaasi leedahay cidhibxumo aduunyada ah waana wax yaabaha muslimiinta u soo jiiday sumcad xumada .
Su��aal: Walaalayaal waxaan jecelahay in aad idin wiidiiyo su'aashan aan ku wareer sanahay, walaalayaal su aasha waa sidan ( MASALAN NAAG AYAAN FURAN CADADIINA WAY DHAMAATAY MIYAAN KU NOQONKARAA MISE) sababtaan ugu wareersanahayna waxay tahay waxaan horey umaqlay in ninkale markuu guursado hadana aay kalatagaan waan kulaabankaraa hadana waxaan muxaadaro ku dhageysta aayad leh ha u diidina naagta ninkeeda iney guursato, marka walaalayaal waxaan jecelahay inaad iigaga soojawaabtaan su'aashaan ayada ah UK
Jawaab: gabadha markii loo dha meeyo sadwxdeeda dalqadood ooy cidada ka baxdo ma guursan kartid aayadoon soo marin nin kale, laakiin hadaad ku furto hal ama labo dalqadood oo ay ka baxdo cidada waad mehersan kartaa waxaana arintaa cadaynaya aayado qur'aan ah iyo axaadiis saxiix ah.